मुद्दतिमा ब्याजदर बढाउने होडबाजी, हेर्नुहोस् कसले कति दिन्छ ?
बिनोद आचार्य काठमाडौं, पुस २६ print
पछिल्लो समय बैंकहरुबीच विभिन्न मुद्दती योजना बनाई धेरै ब्याजदर दिएर ग्राहक तान्ने होडबाजी बढेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरुले निश्चित अवधि र न्यूनतम रकम तोकेर धेरै व्याजदर दिनेगरी मुद्दति योजनाहरु बनाएका छन्। न्युनतम ८० दिनदेखि चाहेअनुसारको अवधिसम्म विभिन्न योजनामार्फत मुद्दतीमा बैंकहरुले निक्षेप लिने गरेका छन्। बैंकहरुले आफ्ना मुद्दती योजनामा ११. १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेका छन्।
मुद्दती खातामा ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलिरहँदा बचत खातामा भने ग्राहकले पुरानै दर पाइरहेका छन्। ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीका अनुसार प्रमुखतः तरलता अभावकै कारण बैंकहरुले उच्च ब्याजदर दिइरहेका हुन्।
बचतमा धेरै रकम नभित्रिने हुँदा मुद्दतीमा बैंकहरुले न्यूनतम मौज्दात तोकेर धेरै व्याजदर दिएको उनी स्वीकार गर्छन्। यद्यपी केही बैंकले भने मुद्दतिमा पनि ठूलो अन्तरले ब्याजदर बढाएका छैनन्। क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर) लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरुलाई चुनौति रहेकाले पनि निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरु लागिपरेको बैंकर्स बताउँछन्।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले पुस मसान्तमा ठूलो रकम राजश्वमा जाने भएकाले पनि त्यसले तरलतालाई केही अभाव भएको उल्लेख गरे। अहिले देखिएको तरलता अभाव केही सातामै अन्त्य हुने शेरचनले स्पष्ट पारे। जसले गर्दा बचत खातामा बैंकहरुले ब्याजदर नबढाएको उनले बताए।
सबै बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भने नभएको बैंकर्स स्वीकार्छन्। व्याजलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरुलाई भने यस्ता मुद्दति योजना अझ महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। यस्तो लगानीमा न्यून जोखिम हुने र प्रक्रिया सहज पनि हुन्छ।
मुद्दतीमा कतिपयले न्यूनतम मौज्दात तोकेका हुन्छन्, भने कतिपयले नतोकिकन दिने गरेका छन्। न्यूनतम मौज्दात नतोकी मुद्दती खाता खोलिदिने बैंकमा थोरै रकम पनि राख्न सकिन्छ।
तपाईले आफ्नो रकम लगानीबाट धेरै प्रतिफल चाहनुहुन्छ भने, उच्च व्याजदर दिने बैंकहरु छान्नुहोस्। तर तपाईले आफूसँग भएको न्यूनतम रकम र बैंकमा राख्ने अवधि भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
हेर्नुहोस् मुद्दतीका योजनामा हाल कुन बाणिज्य बैंकले कति व्याजदर दिन्छन्?
२ वर्ष माथि
नेपाल बङग्लादेश बैंक
सेन्चुरी कर्मसियल बैंक
स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक
बैंक अफ काठमाण्डु लुम्विनी
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २६, २०७३ ११:११:३८